မဂ်လာတောင်ညွှန့် ၁၂၂ လမ်းအတွင်း စစ်တပ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် စျေးသည်တစ်ဦးသေဆုံးပြီး အလောင်းပါသယ်ဆောင်သွား - Myanmar Pressphoto Agency
မဂ်လာတောင်ညွှန့် ၁၂၂ လမ်းအတွင်း စစ်တပ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် စျေးသည်တစ်ဦးသေဆုံးပြီး အလောင်းပါသယ်ဆောင်သွား
MPA August 27, 2021 1 min read
ရန်ကုန်၊ မဂ်လာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ၁၂၂ လမ်းအ တွင်းသို့ ယမန်နေ့ (သြဂုတ် ၂၆ရက်) ညပိုင်းတွင် စစ်ကောင်စီတပ်များ ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့်လမ်းအတွင်း ညပိုင်းစျေးရောင်းချသည့် ၁၂၁ လမ်းတွင်နေထိုင်သော စျေးသည်တစ်ဦး သေဆုံးသွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
စစ်ကောင်စီတပ်များ၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေ ဆုံးသွားသူ၏ ရုပ်အလောင်းအား ၎င်းတို့က မနေ့ညတွင်းချင်း လာရောက်သယ်ဆောင်သွားကြောင်း သိရသည်။
” ည၈နာရီကျော်လောက်က သေနတ်သံတွေကြားတော့ လမ်းထဲမှာသွားလာ​နေတဲ့လူတွေ အကုန်ထွက်ပြေးကြရတာ။ ပစ်တာတော့လမ်းထဲကိုပစ် တာဟုတ်တယ်။ သူတို့ကိုအမူးသမားကသွားဆဲ လို့ပစ်တာလို့သိရတယ်။ လိုက်ပစ်ရင်းနဲ့ လမ်းထဲကစျေးသည် တစ်ယောက် သေသွားတယ်။ ည ၁၂နာရီလောက်မှာ ကား၂စီးနဲ့ အလောင်းကို လာသယ်သွားတယ်” ဟု အဆိုပါလမ်းအတွင်း နေထိုင်သူတစ်ဦးက MPA သို့ ပြောသည်။
မနေ့ညက အဆိုပါ သေဆုံးသူနေအိမ်သို့ပြန်မလာသဖြင့် မိသားစုက ရပ်ကွက်ရုံးကို အ ကြောင်းကြားပြီး ရပ်ကွက်လူကြီးတွေနဲ့လိုက်ရှာရာမှ ၁၁ နာရီခန့်တွင် သေနတ်ထိမှန် ဒါဏ်ရာဖြင့် နောက်ဖေးလမ်းကြားထဲမှာ သွေးထွက်လွန်ပြီးသေဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
ထိုသို့ သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် အလောင်းတွေ့ရှိမှုအား စစ်ကောင်စီတပ်များက သတင်းရရှိပြီးနောက် လာရောက်သယ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ် ပြီး မည်သည့်နေရာသို့ သယ်ဆောင်သွားသည်ကိုမသိရှိရသေကြောင်း သိရသည်။
စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် စစ်တပ်၏ အကြမ်း ဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးနေရသူ နေ့စဉ်နီးပါးရှိနေပြီး ၆လအတွင်း သေဆုံးသူ တစ်ထောင် ကျော်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဓာတ်ပုံ – ၁၂၂ လမ်းသို့ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှ ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်စဉ် Facebook user တစ်ဦး
#မဂ်လာတောင်ညွှန့် #၁၂၁လမ်း #စစ်ကောင်စီ#ပစ်ခတ်မှု #စျေးသည်တဦးသေဆုံး #MPA
Military KilledaSeller and Took away the Body on 122nd Street of Mingala Taungnyunt
One seller was killed in the SAC military’s shooting on the 122nd street on August 26 evening in Yangon’s Mingala Taungnyunt township. The killed seller lived on the 121st street.
The dead body was picked by the military themselves the same evening.
“At about 8pm, everyone on the streets was running at the gun sounds. They shot into the streets. It’s said they did because they were shouted at by some drunks. One seller in the street was killed in the shooting. They picked up the dead body with two trucks at about 12am,” said one who lives on that street to MPA.
After the man didn’t return home that night, the family reported to the ward administration office forasearch and he was found dead from over bleeding fromagun wound in the back street at about 11pm, he continued.
After the military learned of the death from the gun wound, they picked up the body and nothing is known about where they took it.
Since the military coup, deaths are occurring almost every day and more than 1000 have been killed in the violent shootings of the military within six months.
Photo _ Terrorist military shooting on the 122nd Street –aFacebook user
#MingalaTaungnyunt #121Street #SAC#Shooting #OneSellerKilled #MPA
Tags: Dead militarycoup MPA News Yangon
Previous: တန့်ဆည်မှာ စစ်တပ်က မီးရှို့သဖြင့် ထွက်ပြေးသော အိမ်ခြေ ၇၀၀ကျော်အတွက် စားနပ်ရိက္ခာအထောက်အပံ့များလိုအပ်နေ
Next: ကပေါင်းကျ ကျေးရွာတွင် မနေ့ညက စစ်တပ်က ပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သုံးဦးသေဆုံးခဲ့